Resadresaka nifanaovana tamin'i Джеймс Рейнольдс, mpanorina ny Veravo
Джеймс Рейнольдс, відомий наїта ан’і Вераво, SEO Шерпа арі ціндріо ​​Джам, діафрагма нанапа-кевітра хіресака амінціка мамба маркетинг-фікарохана. Veravo dia manome fitaovana maimaim-poana ho an’ny tompon’ny tranonkala izay afaka manampy amin’ny fampidinana ny Fiveamoivoizanao amin’ny manaraka.
Fally izahay fa nahazo vintana hisafidy ny atidohan’i James amin’ny marketing, satria izy ihany koa dia mpampiantrano ny Traffic Jam Podcast ary tena mahay momba ny milina fikarohana sy ny haino aman-jery sosialy.
WHSR: Привіт, Джеймс, місаотра ні ханайкі, ні хизаранао, сасансасани, аміньні хевітрао, мамба, ні варотра, аміні мпамакі.
Misaotra anao, voninahitra izany.
WHSR: Voalaza ao amin’ny orinasanao fa manana fandraharahana "Ага!" Іанао. Inona moa io fotoana io io arry inona ilay "Ага!"?
Ny fandraharahana lehibe indrindra "Ага" dia nahita ny fidiram-bola maharitra.
Nandritra ny taona maro dia nihazakazaka sarimihetsika fandraisam-bahiny aho, izay ahafahan’ny mpanjifa mametraka karama tsy misy vidiny. Ny fampiasam-bola amin’ny saripika sary dia zavatra iray amin’ny fianakaviana salantsalany no indray mandeha isaky ny taona vitsivitsy, noho izany dia noho izany dia mila mitady mpanjifa vaovao isika mba hihaona ny vola miyanaberyyyyyyonyyylalayyyyylalayyyyylalayyyyylala yynala syna haberia. Nanohina izy.
Tamin’ny fotoana iray dia nanatona izahay mba hanao sary an-tsekoly isan-taona. Teo am-piandohana aho noho ny habetsahan’ny habeny, ny hakanton’ny asa famoronana asa an-tsary dia nesorina lavitra ireo sary avo lenta nataonay. Saingy rehefa fantatrao fa ny sekoly dia vonona ny hanao sonia ny fifanarahana amin’ny taona 5, midika moe vola azo antoka isan-taona ho an’ny 5 taona, hoy aho hoe "заздрити!"
Ny asa rehetra ataoko amin’izao fotoana izao dia ny famandrihana.
WHSR: Manana tranonkala antsoina ianao Veravo izay tokony hifantohana amin’ny fiveamoivoizana amin’ny tranokala. Inona ireo fitaovana sasany amin’ity tranonkala ity izay hanampy ny mpamaky hitombo ny fiveamoivoizana?
Amin’ny veravo.com, dia mamoaka lahatsoratra sy sary amin’ny blôgy izay mampianatra ireo teknika takiana mba hahazoana fitaterana bebe kokoa amin’ny tranokalanao ianao ary manao fivarotana bebe kokoa. Ny tranonkala ihany koa dia tranon’ny podcast Traffic Jam.
Ankoatra ny vooaty fanabeazana ananantsika будь-яка, dia manome tatitra momba ny fanadihadiana maimaimpoana ihany koa izahay. Ao amin’ireo tatitra ireo dia manombantombana ny tranonkalanareo ho an’ny teknikan’ny SEO sy ny SEO ary manome torohevitra momba ny fomba hanatsarana azy. Manome maimaimpoana ireo tatitra ireo, ary malaza be izy ireo.
WHSR: Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny mpitsidika tranokala androany dia matetika miditra amin’ny alàlan’ny finday. Zava-dehibe ny hahatonga ny tranonkalanao ho sariaka? Місі алфавіт алгоритм фауни фареретана фарань натаоньі Google amin’ity lafiny ity?
Ny fanaovana ny tranokalanao tsara amin’ny fitaovana finday dia tsy maintsy. Afaka miditra amin’ny aterineto ny olona ary avy amin’ny fitaovana samihafa. Tsy azo ihodivirana fa ny Google dia hampihatra ny fahombiazan’ny vohikala finday ho singa fototra fototra satria ny fikarohana miseho ankehitriny dia hita any amin’ny fitaovana finday noho ny fantsona. Nanjary zava-dehibe tokoa ny finday ka tokony handinika ny traikefa an-telefaona voalohany, t Desktop faharoa. Manavao ny tranokalan’ny SEO Sherpa isika amin’izao fotoana izaa ary manomboka amin’ny alalan’ny fametrahana finday voalohany.
WHSR: Be atao ny olona. Tsy misy fomba iray tokony hiandry ela ny tranokalanao. Misy zavatra tokony ho fantatry ny olona ve ato amin’ity faritra ity izay mety hanampy amin’ny fananganana tranokala sy ny fidiran’ny mpanjifa?
Tena ilaina ny fotoana sarotra. Ny fikarohana ataonay dia mampiseho fa amin’ny faharetan’ny vanim-potoana vetivety, dia дуже ny 7% ny fifanakalozan-kevitra sy ny 5% amin’ny fijerena fikarohana.
Mitaky fotoana ny fiantraikan’ny fiveamoivoizana sy ny fivoarana.
Hanampy amin’ny fanatsarana ny vahaolana haingana ny tranonkala hahazoana ny fampiantranoana haingana indrindra ho an’ny tranonkalanao ary manome toky fa voafetra ny haben’ireo rakitra. Ny tranonkalan’ny orinasanay dia natsangana tamin’ny WordPress ary hitanay WPEngine хостинг Manatanteraka tsara kokoa ny fampiantranoana ци miankina, manapaka ny famadihana amin’ny fotoana mitovy amin’ny 50%.
WHSR: Inona no fahadisoana ци hitanao ataon’ny olona amin’ny tranokalany?
Matetika loatra izy ireo.
Misy ny fiheverana fa ny famoahana ny votoaty vaovao ao amin’ny tranonkalanao dia fitaovana goavana amin’ny laharana findramam-bola; Angano izany. Ny tena manan-danja dia ny mamorona ny votoaty tsara indrindra azonao atao, avy eo mba hahazoana eyeballs amin’io votoaty io miaraka amin’ny fivarotana mahomby.
Manoro hevitra aho fa ireo mpamorona votoaty dia mandany fotoana bebe kokoa amin’ny famolavolana sy famoronana votoaty izay mikendry tsara ny mpihaino azy ary amin’ny fotoana misimisy kokoa amin’ny fanentanana. Ny kely kokoa saingy ny tsara kokoa dia hamerina vokatra lehibe kokoa.
WHSR: Lazao anay kely momba ny lalana Podcast maimaim-poana. Inona no hianaranao raha manaraka ny podcastanao izy?
Можливий подкаст діалогу. Ізані ні фампезіхоана анкапобені ісан-керінандро фа міаракі амінний мпітаріка варотра до анді Ранда Фішкіна, Джо Пуліцці, Перрі Маршалла арі хай хафа.
Mizara paikady maika izahay mba hahazoana Fiveamoivoizana bebe kokoa ary hananganana mpihaino mahasoa amin’ny aterineto.
Ny fananganana mpihaino dia manakiana satria tys misy mpandraharaha tsy manana raharaham-barotra.
Kevin Kelly nanoratra momba ny hevitra 1000 mpankafy marina ary ho an’ny ankamaroan’ny orinasa dia ampy ho fananganana orinasa tena maharitra. Vondron’olona manana mpihetsiketsika mahatokona izay hampiroborobo ny raharaham-barotra ary hanampy ny hafatrao hiparitaka.
Amin’ny alàlan’ny fivarotana votoaty, ny fifandraisana eo amin’ny fifandraisana sy ny fananganana "фан-база" dia azo atao kokoa noho ny teo aloha.
WHSR: Nahavita orinasa mahomby maro ianao nandritra ny taona maro. Araka ny hevitrao inona no singa fototra ilaina hahombiazana ho mpandraharaha?
Heveriko fa i Steve Jobs no mametraka ny tsara indrindra amin’ny "malaza ho mijanona, mijanona ho adala" десять. Ny mpandraharaha mahomby dia manana hanoanana tena tsara hatao sy mamorona tsaratsara kokoa, ary vondron-drivotra somary adaladala izay mamela azy ireo hanatratra tanjona amin’ny hafa tsy hanomboka hanandrana.
WHSR: mpilalao регбі напівпро-талоха ianao. Ахоана dia fanatanjahantena іграшка ny orinasa? Inona avy ireo hevitra azo ampiharina amin’ny ezaka rehetra?
Samy mitaky fampiharana, samy manana ny lalao (paikady), tombontsoa amin’ny fiveaninanana arry ekipa. Maro ireo fitoviana eo amin’ny sehatry ny fandraharahana sy ny fanatanjahantena no mahatonga ny atleta mahomby ho lasa mpandraharaha ara-barotra mahomby.
Misaotra an’i Джеймс Рейнольдс
Fisaorana manokana an’i James Reynolds noho ny nandany fotoana hiresahana anay momba ny tetika mahomby izay azo ampiasaina hananganana tranonkala matanjaka kokoa. Na dia mampihatra ny sasany amin’ireto hevitra ireto aza ianao, dia heverinay fa hahita fahasamihafana lehibe amin’ny fiveamoivoizana amin’ny tranokalanao ianao.
Azonao atao ny manambatra ireo hevitra ireo amin’ny toro-hevitra avy amin’ny mpamorona WHSR, Jerry Low, іграшка ny azy 5 Fomba mahomby hampitomboanao ny fitetezana ny blôgy.
Aza adino ny mampitaha an’i James ‘Podcast an’ny Traffic Jam ho an’ny hevitra misimisy kokoa amin’ny fananganana tranokala sy tranokala SEO tranokala.
Ny androm-piainana 52 an’ny ไอเดีย dia manomboka amin’ny blôginao